नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नि’धन भएको आज ६ बर्ष पूरा ! – Life Nepali
नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नि’धन भएको आज ६ बर्ष पूरा !
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका मिलनसार, सफल नायक तथा निर्माता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नि’धन भएको आज ६ बर्ष भएको छ । वि.सं २०७१ साल साउन २५ गते बिहान उनको नि’धन भएको थियो । बिहे भएको केही हप्तामै स्वा’स्थ्यमा स’मस्या भएपछि उपचारका लागि श्रीकृष्ण नायिका स्वेता खड्काको साथमा दिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीमा केही हप्ता उपचार पछि उनले प्रा’ण त्या’गेका थिए । श्रीकृष्णको नि’धन भएको समयमा उनी अभिनित चलचित्र ‘कोहिनुर’ हलमा चलिरहेको थियो । *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
श्रीकृष्णले आफूले निर्माण गरेको चलचित्रको सफलता हेर्न पाएनन् । यो चलचित्रले बक्स अफिसमा नयाँ रेकर्डसहितको व्यापार गरेको थियो । श्रीकृष्णले बनाएको चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बक्स अफिसमा सुपरहिट भएको थियो । नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई चलचित्र क्षेत्रका कलाकार, निर्माता, निर्देशकले सामाजिक संजालबाट संझिएका छन् । नायिका करिश्मा मानन्धर, विपना थापा, निर्देशक आकाश अधिकारी लगायतले श्रीकृष्णसँग काम गर्दाको पल संझिएका छन् ।
श्रीकृष्णको जन्म वि.सं २०२७ साल पौष १४ गते भएको थियो । उनले अभिनय गरेका ‘आफन्त, आफ्नो मान्छे, सुख दुःख, ए मेरो हजुर, हामी तिन भाई, कहाँ भेटिएला, कोहिनुर’ बक्स अफिसमा हिट मानिन्छन् । नि’मोनियाले ग्र’सित भएपछि उपचारका लागि दिल्ली गएका श्रीकृष्ण्को नि’धन हा’डको क्या’न्सरका कारण भएको थियो ।
श्रीकृष्णले चलचित्र ‘भूमरी’बाट वि.सं २०४५ मा चलचित्र क्षेत्रमा पाइला राखेका थिए । उनले नायकको रुपमा भने ‘नाता’ चलचित्रबाट अभिनयलाई अगाडि बढाएका थिए । नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले चलचित्र क्षेत्रलाई छाडेर गएको ६ बर्ष भएको छ । तर, उनी लाखौ नेपालीको मनमा बास बस्न सफल छन् ।
Previous बहिरियो भुवन केसी को अर्को क’र्तुत , सुन्दा सबै है’रान (भिडियो सहित )
Next नेपाल आइडल को फाइनल आज हुँदै , तपाइको भोट कसलाइ ?
२ बर्षदेखि प्रेममा इन्दिरा, सार्बजनिक ग’रिन यस्तो तस्बिर,
टिकटकबाट चर्चा कमाएकी रेश्मा धेरै क्युट हेरौं तस्विरहरु